ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးခြင်း ဆိုတာ - Hello Sayarwon
အသက်လေးရလာတဲ့သူတိုင်းမှာ အရင်ကလောက် မဖျတ်လတ်တော့တာတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် အသက်ရလာတဲ့အခါမှာ တက်တက်ကြွကြွ ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်နဲ့ အိုမင်းချင်တဲ့ ဆန္ဒ ( ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးခြင်း ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းလေး) ရှိကြစမြဲပါ။ ဒါက ဆုတောင်းဖို့ထက် တကယ်ကတော့ အဓိက လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတာပါ။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက သူတွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံကလူတွေက အခြားနိုင်ငံတွေကသူတွေထက် အသက်ပိုရှည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနိုင်ငံတွေမှာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေ အများအပြား ရှိနေတာပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် လူ့သက်တမ်းရှည်တဲ့ နိုင်ငံတွေပေါ့။
သူတို့တွေ သက်တမ်းရှည်တာက ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ပြောင်းလဲထာထားတာကြောင့်ပါ။ အချို့သော နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်တာက သက်တမ်းရှည်စေနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ပြန်ဆက်ရရင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးခြင်းဆိုတာက အသက် ၅၀ ကျော်ပြီး လူကြီးတန်းကို ရောက်လာတဲ့ အသက်အပိုင်းအခြား အရွယ်မှာ ရောဂါကင်းပြီး သန်သန်မာမာ ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ် ရှိနေတာကို ဆိုလိုတာပါ။
ရောဂါဆိုတဲ့နေရာမှာ တစ်ခါတလေ သွေးတိုးတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာမျိုးကတော့ ရှိနိုင်တာပေါ့။ အသေးစား ဖျားနာမှုကလွဲလို့ ကြီးကြီးမားမား ဖျားနာမှု မရှိတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးဖို့ ဘာတွေ လိုက်နာရမလဲ။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးဖို့ လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေကတော့
အသက်အရွယ်အလိုက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေက ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အာဟာရ လိုအပ်ချက် ပြည့်မီအောင်စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့ကို အာဟာရ လိုအပ်ချက် ပြည့်မီစေဖို့အတွက် အခုလိုလေး စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲ ပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ကယ်လ်လိုရီ အပိုတွေ မပါတဲ့ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို အဓိက စားပေးပါ။ သစ်သီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ကောက်နှံတွေ၊ အဆီနဲ့ အရေခွံ မပါတဲ့ အသား၊ အဆီပါဝင်မှု နည်းတဲ့ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ အခွံမာသီးတွေ၊ အစေ့အဆန်တွေကို စားပေးဖို့ လိုပါမယ်။
အာလူးကြော်၊ သကြားလုံး၊ ကင်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ဆိုဒါ၊ အချိုရည်၊ အယ်လ်ကိုဟော စတာတွေကို ရှောင်ပေးပါ။
ကိုလက်စထရော နဲ့ အဆီ ပါဝင်မှု နည်းတာတွေကိုပဲ စားပေးပါ။
ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့အတွက် ရေများများ သောက်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် လုပ်တာက ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိစေနိုင်ဖို့ ထောက်ကူပေးပြီး နာတာရှည် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မနေဘူး။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မရှိဘူးဆိုရင် ကြာလာလေလေ လှုပ်ရှားမှု နည်းလာပြီး ရောဂါတွေ ခံစားလာရနိုင်သလို ဖျတ်လတ်မှုတွေလည်း လျော့ကျလာမှာပါ။
တစ်နေ့တာမှာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ပမာဏကတော့ အသက်အရွယ်အလိုက် ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းပါ။
အဝလွန်နေတာ၊ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် နည်းနေတာတွေက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာစွာ စားသောက်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပုံမှန် လုပ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ပြီး သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းဖို့ လိုပါမယ်။
စိတ်ပျို ကိုယ်နုဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ အထိ ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ် တက်တက်ကြွကြွ နေနိုင်စေဖို့ဆိုရင် စိတ်ကိုလည်း တက်တက်ကြွကြွ ဖြစ်အောင် နေပါ။ မှတ်ဉာဏ် ကောင်းစေမယ့် အလေ့အထလေးတွေကို မွေးမြူပါ။ အသစ်အသစ်တွေကို သင်ယူပါ။ စာဖတ်ပါ။ ဂိမ်းတွေ ကစားပေးပါ။
အသက်အရွယ် ရလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပိုက ပိုပြီး အရေးပါလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် တရားထိုင်တာ၊ စိတ်အပန်းပြေစေမယ့် အလုပ်တွေ လုပ်တာ၊ ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုတာလိုမျိုး စိတ်ကျန်းမာစေဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ အလေ့အထတွေကို လုပ်ပေးပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ မိသားစုကို ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
ဝါသနာပါတဲ့ အလေ့အထလေးတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။
ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသူတွေ၊ စိတ်အပန်းပြေစေမယ့် အလေ့အထတွေကိ မွေးမြူထားသူတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမို ကျန်းမာကြပါတယ်။
ဒီလိုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးတာက ပိုမို ပျော်ရွှင်စေပြီး တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း ပိုကောင်းစေပါတယ်။
ပုံမှန် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ပါ။
အသက်အရွယ် ရလာတဲ့သူတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းက ပုံမှန် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီလို လုပ်ဆောင်တာက ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ကြိုတင် ကာကွယ်ခွင့်ရသလို ရောဂါတွေကို စောစောသိ စောစောကုသတာကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
တကယ်လို့ ဆေးလိပ်သောက်တတ်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးနိုင်ဖို့အတွက် ဆေးလိပ်ကို ဖြတ်လိုက်ပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာက အချို့သော ကင်ဆာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရာရောက်ပါတယ်။ နှလုံး နဲ့ အဆုတ် ထိခိုက်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရာ ရောက်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ ချော်လဲနိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ပိုများနေပါတယ်။ အသက်ရလာလို့ ချော်လဲတဲ့အခါ အရိုးတွေက ကျိုးလွယ်သလို ပြန်ဆက်ဖို့ကျ တော်တော်လေး ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားတဲ့လာတဲ့အခါ သေချာလေး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ နေအိမ်ကိုလည်း ဘေးကင်းအောင် သေချာလေး ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါမယ်။
အခုပြောပြခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးလိုက်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ရယူတာ စစ်ဆေးတာတွေကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်တာ၊ အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်တာ၊ အာဟာရ မျှတအောင် စားတာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါမယ်။
Healthy Aging https://www.paho.org/en/healthy-aging#:~:text=Healthy%20aging%20is%20a%20continuous,life%20throughout%20the%20life%20course. Accessed Date 28 September 2021
Healthy Aging https://medlineplus.gov/healthyaging.html Accessed Date 28 September 2021
What Do We Know About Healthy Aging? https://www.nia.nih.gov/health/what-do-we-know-about-healthy-aging Accessed Date 28 September 2021